Xildhibaanada Cusub Ee KG makuwa u adeegayaa Deeganadooda mise waxaay fulinayaan Siyaasada losoo xushay | SMC
Home WARARKA MAANTA Xildhibaanada Cusub Ee KG makuwa u adeegayaa Deeganadooda mise waxaay fulinayaan Siyaasada...
Xildhibaanada Cusub Ee KG makuwa u adeegayaa Deeganadooda mise waxaay fulinayaan Siyaasada losoo xushay
Xog dheer oo kasoo baxaysa taariikh nololeedka shaqo ee xildhibaanada cusub Koonfur Galbeed .
Warbaahinta Wadaninews24 online oo dabagashay hanaanka loo maray soo xulida Xildhibaanada Cusub JBM iyo qorshayaasha qarsoon ee qaban doonaan.
Xildhibaanada Cusub Mayland waa kuwa laga soo xulay Saraakiisha Sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Deeganadooda yahay maylanda iyo qaar isugu jira siyaasiin iyo shaqaalaha rayid ka tirsan DFS . Markii la isku celceliyay 90 % waxaa la xaqiijiyay ineey ku yimaadeen rabtaan ka Fahad Yaasiin.
Wa maxay sababta Lafta gareen sameentiisu soo xulitaanka xildhibaanada cusub Maylanda u yaraatay ?
Bacdama uu jiro Tuhun ah Lafta gareen in uu isbadalo doorashada 2020/2021 in laga shaqeeyo siduu u noqon lahaa sharafeed aan sameen ku laheen Amniga iyo Doorashada marka loo baahdana si fudud lootuuro.
Waa maxay qorshaha qarsoon ay qaban doonaan xildhibaanada cusub ee Maylanda ?
Qorshaha qarsoon ay qaban doonan Xildhibaanada Mayland ayaa ah in xiliga doorashada Sanatarada Aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Maylanda aysan soo bixin Isla markaasna lasoo saarto Xildhibaano Cusub.
Sido kale ineey soo saaraan habraacyada doorashooyinka barlamaaniga kadhici doono Maylanda Soomaaliya 2020 .
Qorshaha ugu weyn ayaa ah hadii sanadka 2021 ay Soomaaliya Doorasho ka dhacdo isla markaasna looga adkaado murashaxa ay wataan ineey qasaan daganaashiyahay Siyaasadeed ee Maylanda taaso damacoodu yahay in ay xildhibaanada noqdaan kuwa curyaamiya howlaha hormarinee eelaga qaban lahaa Maylanda.
Maxaa la gudboon Dadka kasoo jeeda Deegaan ada Maylanda Soomaaliya ?
In ay muujiyaan waqtigaan adag diyaar garoow in doorashada soo soco u dhacdo cadaalad Isla markaasna ay fashiliyaan qorsha kasto dhabar jab ku ah Hormarka maylanda ee ka damacsan yihiin Fahad Yaasiin iyo Khayre.
Previous articleDhageyso:-Hay’adaha Garsoorka oo ku dhawaaqey inay Shaqooyinka hakinayaan
Next articleDHAGEYSO:-Wafdigii DF Somalia oo Qaadacay Qodobadii Shirkii Garoowe iyo Go’aano ay soo saareen